Yuusuf Garaad: Waa sharci daro heshiisyada Maamul Goboledyada ... | Universal Somali TV
Yuusuf Garaad: Waa sharci daro heshiisyada Maamul Goboledyada ay la galayaan Dowladaha shisheeye
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in ay sharci darro tahay Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada ee dibadda ku saxiixaya heshiisyo aanay ka warqabin dowladda Federaalka ah.
Yuusuf Garaad waxaa uu yiri “Madaxweynayaasha maamul Goboleedyada inta caasimad dal kale tagaan heshiis ma saxiixi karaan sharcina umalaha waliba iyaga oo Dowladooda mucaaradaya.”Ayuu yiri Yuusuf Garaad.
Waxaa uu sheegay in Maamul Goboleedka uu yahay dhul ka mid ah Soomaaliya oo leh,Madaxweyne,Wasiirro,Baarlamaan islamarkaana leh awood la yaqaan,waxaana uu sharci darro ku tilmaamay madaxweynayaasha maamul Goboleedyada garab socda.
Yuusuf Garaad ayaa sheegay in waxyaabaha ay ku dhaqaaqayaan madaxweynayaasha maamul Goboleedyada qaar ay dhaawac ku tahay qarannimada Soomaaliya.
Waxaa uu ugu baaqay Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay meel isugu imaadaan islamarkaana iska warqabaan dowladda dhexe iyo dowlad Goboleedyada.
Kan-xigaGolaha Wasiirada Galmudug oo ka shira...
Kan-horeCiidamada Dowladda oo weeraray Saldhi...
39,206,850 unique visits